Choo uzo uzo igwe eletriki puru iche | ebike Shuangye
Home ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik Pụrụ iche igwe kwụ otu ebe electric 700C * 35C
Ihe nlereanya: A6-R
Moto: 250W / 350W
Batrị: 36V 8AH / 10AH
Oke ọsọ: 25 - 30km / h
Max Ibu Ibu: 80-100kg
Gear: 7/9/21/27 gia
Usoro breeki: 160mm usoro diski igwe
Nhazi ohuru pụrụ iche n'okporo ụzọ anyịnya igwe ọkụ eletrik iji dozie ọtụtụ mkpa ndị ahịa, dị ka America na Europe. Mee ka ogologo igwe ogologo igwe dum gbakwunye ma tinye batrị batrị, gbasaa ikike batrị n'otu oge. Ọdịdị zuru oke nke igwe kwụ otu ebe ụzọ ndị a dị nkenke n'ihi atụmatụ nke ọkụ eletrik na tube dị ala. Gbakwunye ebe ị ga-esi wụnye kickstand na etiti ahụ, nke dị mfe maka ndị mmadụ dịka njem njem.
Onyinye 250w na-arụ ọrụ pụrụ iche n'okporo ụzọ anyịnya igwe Igwe eletriki azụ, ọ na-eme igwe kwụ otu ebe kachasị mma iji ruo ọsọ ọsọ nke 25-30km / h n'okporo ụzọ dị larịị. Igwe ọkụ eletrik dị elu bụkwa nnukwu onye inyeaka iji mee okporo ụzọ n'okporo ụzọ n'ụzọ dị mfe. Na moto karịrị 80 percent arụmọrụ na n'okpuru 60 Db mkpọtụ. Niile nwere ike iwetara gị arụmọrụ dị elu mana ahụmịhe mkpọtụ mkpọtụ dị ala.
Bịa na ọtụtụ-arụ ọrụ nnukwu ihuenyo LCD ngosi na-egosi ọtụtụ data nke okporo ụzọ e-igwe, dịka ọmụmaatụ Anya, Mileage, Okpomọkụ, Ike Batrị, Ike Ike, Max Speed ​​wdg. Ma mmiri magburu onwe ya na-emekwa ka ọ rụọ ọrụ dị mma na mmiri ozuzo. Ise etoju pedal aka na pịa thum trotul, ka moto ọkọnọ ọzọ elu na-agba maka nke a pụrụ iche n'okporo ụzọ anyịnya igwe.
Ikpokọta na a 36V lithium batrị nwere ike imeghari gị dị iche iche chọrọ. Batterykpụrụ batrị dị elu bụ 8AH, ọ bụrụ na ịchọrọ ibu, enwere ike ịhọrọ 10AH. Add a aluminum alloy batrị tube bụ otu n'ime isi ihe nke a pụrụ iche n'okporo ụzọ anyịnya igwe. Na ìhè arọ na-eme ka ndị ahịa nwere ike ịmegharị ya ngwa ngwa, chajie batrị dị nso na ntọala nwere chaja 42V 2A wetara, cherekwa oge elekere 5-7 iji rụchaa.
Wheelgbọ ụkwụ ihu na azụ na-eji sistemu breeki diski 160, ọbụlagodi na mmiri ma ọ bụ oyi ma ọ bụ ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ ọnọdụ mberede, ọ nwere ike ịnye ike braking ozugbo. Ma jiri ntọala ntọhapụ ọsọ ọsọ na wiilị ụkwụ ihu, ọ dị mfe iwepu wiilị dị n'ihu mgbe ịchọrọ. Enwekwara ike ịhọrọ breeki hydraulic.
Hapụ ngwa ngwa
Ntọhapụ ngwa ngwa bụkwa otu n'ime ihe ngosi kachasị mma ụzọ ụgbọ ala kacha mma, ha dị mma ma na-enweghị mmiri. E nwere ebe abụọ a na-ahapụ ngwa ngwa na igwe kwụ otu ebe. Otu na ngosipụta na otu na controllu.
Iji mee ka ndị ọrụ na-agba nkasi obi, ụzọ ụgbọ okporo ígwè a pụrụ iche na-ebuwanye taya taya, enwere ụdị taya anọ ị nwere ike ịhọrọ, dịka 700 * 28C, 700 * 32C, 700 * 35C na 700 * 40C. Họrọ otu nke bụ suitbale maka ahịa gị.
Tags:pụrụ iche ụzọ igwe kwụ otu ebe ewepụghị mmanya ụzọ bike
Mbụ: 36V 350W igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki hydraulic 160
Next: Shuangye igwe eletriki igwe eletrik ohuru na batrị 36V